မန်နေဂျာ ဆီဖုန်းတွေ ဆက်ပြီး အတွင်းရေးကို စပ်စုတဲ့ သူတွေကို နာမည်တွေရွတ်ပြီး Live လွှင့်ပြောပြစ်မယ်လို့ ဒဲ့ပြောလာတဲ့ဇာဇာထက် – Let Pan Daily
မန်နေဂျာ ဆီဖုန်းတွေ ဆက်ပြီး အတွင်းရေးကို စပ်စုတဲ့ သူတွေကို နာမည်တွေရွတ်ပြီး Live လွှင့်ပြောပြစ်မယ်လို့ ဒဲ့ပြောလာတဲ့ဇာဇာထက်
လူတိုင်းနီးပါးမှာလူမသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့ရှိနေစမြဲပါ။ ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်လှန် ထောင်းမယ့်အဖြစ်မျိုးတော့ ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။ ဇာဇာထက်မှာလည်း သူမရဲ့ အတွင်းရေးကိစ္စတစ်ချို့ကို ပရိသတ်တွေကိုသိသင့်သလောက် သိခွင့်ပေးထားခဲ့ပြီး ထိန်ချန် ထားတာတွေရှိကြောင်းလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ ဒါကိုမှ စည်းမရှိဘဲ အတင်း စပ်စုနေသူတွေ ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ” I don’t like curiosity ok? ကိုယ်ချင်း စာဖို့ထက် နောက်ထပ်စပ်စုချင်သူများလဲ ကျွန်မရေးတဲ့ ဒီစာလေးကိုမြင်ကြ ပါစေ Social ကျပြီး အရမ်း attitude ဖြစ်တဲ့သူတွေကလဲနော် ကျွန်မအတွင်းရေးစပ်စုတာ ကျွန်မဖုန်းကို မန်နေဂျာက မဇာ personalမို့ မသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ ဖြေတာကို သူ့သူငယ်ချင်းပါ တရားစွဲတာဘယ်သူလဲသိချင်လို့ သူ့ကိုလှမ်းမေးတာပါပြောပြီး မန်နေဂျာကိုတောင် စိတ်ဆိုးသွားလေသတဲ့ကွယ် ပြီးတော့ကျွန်မကိုပါ ဖေ့စဘွတ်ကပါ သူတို့တွေကအန်ဖရန့်လုပ်သွားတာကိုယ်ကသိတောင်မသိဘူး ”
ကိုယ့်မန်နေဂျာပြောမှကိုယ်သူတို့နာမည်တွေရိုက်ရှာကြည့်တော့ဖရန့် မဟုတ်တော့ဘူး ရယ်ရတယ် educated ဖြစ်ပြီး social ကျတဲ့သူမျိုးဆို ပိုတောင် ethic ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား? စိတ်ဆိုးရုံမကလို့လဲပါသေသေ ဒါမျိုးမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ကျွန်မ မလွမ်းပါဘူးရှင့် ကျွန်မ မန်နေဂျာခန့်ထားတာ ရှင်တို့အားတိုင်း ဖုန်းခေါ်စပ်စုဖို့ထားတာ မဟုတ်ဘူး အလုပ်အတွက်သီးသန့် ထားထားတာ ပအို့ဝ်းမနော် သဘောကောင်းတယ်နော် စိတ်ဆိုးအောင်လာမလုပ်ကြနဲ့ နာမည်တွေရွတ်ပြီး Live လွှင့်ဒဲ့ပြောပြစ်မှာ ငါဘာမှဂရုစိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး ” ဆိုပြီး ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
Photo – Zar Htet
လူတိုင္းနီးပါးမွာလူမသိေစခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနစၿမဲပါ။ ကိုယ္ေပါင္ ကိုယ္လွန္ ေထာင္းမယ့္အျဖစ္မ်ိဳးေတာ့ ဘယ္သူမွမျဖစ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဇာဇာထက္မွာလည္း သူမရဲ႕ အတြင္းေရးကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕ကို ပရိသတ္ေတြကိုသိသင့္သေလာက္ သိခြင့္ေပးထားခဲ့ၿပီး ထိန္ခ်န္ ထားတာေတြရွိေၾကာင္းလည္းဝန္ခံထားပါတယ္။ ဒါကိုမွ စည္းမရွိဘဲ အတင္း စပ္စုေနသူေတြ ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ခဲ့ရပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို ” I don’t like curiosity ok? ကိုယ္ခ်င္း စာဖို႔ထက္ ေနာက္ထပ္စပ္စုခ်င္သူမ်ားလဲ ကြၽန္မေရးတဲ့ ဒီစာေလးကိုျမင္ၾက ပါေစ Social က်ၿပီး အရမ္း attitude ျဖစ္တဲ့သူေတြကလဲေနာ္ ကြၽန္မအတြင္းေရးစပ္စုတာ ကြၽန္မဖုန္းကို မန္ေနဂ်ာက မဇာ personalမို႔ မသိပါဘူးခင္ဗ်ာလို႔ ေျဖတာကို သူ႔သူငယ္ခ်င္းပါ တရားစြဲတာဘယ္သူလဲသိခ်င္လို႔ သူ႔ကိုလွမ္းေမးတာပါေျပာၿပီး မန္ေနဂ်ာကိုေတာင္ စိတ္ဆိုးသြားေလသတဲ့ကြယ္ ၿပီးေတာ့ကြၽန္မကိုပါ ေဖ့စဘြတ္ကပါ သူတို႔ေတြကအန္ဖရန႔္လုပ္သြားတာကိုယ္ကသိေတာင္မသိဘူး ”
ကိုယ့္မန္ေနဂ်ာေျပာမွကိုယ္သူတို႔နာမည္ေတြ႐ိုက္ရွာၾကည့္ေတာ့ဖရန႔္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ရယ္ရတယ္ educated ျဖစ္ၿပီး social က်တဲ့သူမ်ိဳးဆို ပိုေတာင္ ethic ရွိရမွာမဟုတ္ဘူးလား? စိတ္ဆိုး႐ုံမကလို႔လဲပါေသေသ ဒါမ်ိဳးမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း ကြၽန္မ မလြမ္းပါဘူးရွင့္ ကြၽန္မ မန္ေနဂ်ာခန႔္ထားတာ ရွင္တို႔အားတိုင္း ဖုန္းေခၚစပ္စုဖို႔ထားတာ မဟုတ္ဘူး အလုပ္အတြက္သီးသန႔္ ထားထားတာ ပအို႔ဝ္းမေနာ္ သေဘာေကာင္းတယ္ေနာ္ စိတ္ဆိုးေအာင္လာမလုပ္ၾကနဲ႔ နာမည္ေတြ႐ြတ္ၿပီး Live လႊင့္ဒဲ့ေျပာျပစ္မွာ ငါဘာမွဂ႐ုစိုက္တတ္တာမဟုတ္ဘူး ” ဆိုၿပီး ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္က စင္ေပၚမွာ ဂြၽမ္းထိုးၿပီးက ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္း အမွန္ကို ေျပာျပလာတဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး
ကြည့်မိ သူတိုင်း ပါးစပ် အဟောင်းစားဖြစ်သွားစေမယ့် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို ချပြ လာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်